Madaxweyne Trump oo qirtay in Koonto uu ku leeyahay bankiyo kuyaalla Shiinaha. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Madaxweyne Trump oo qirtay in Koonto uu ku leeyahay bankiyo kuyaalla Shiinaha.
Madaxweyne Trump oo qirtay in Koonto uu ku leeyahay bankiyo kuyaalla Shiinaha.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qirtay in uu koonto ku leeyahay Bankiyo ku yaala dalka Shiinaha, sida uu baahiyay wargeyska caanka ah ee NEW YORK TIMES.
Previous articleQaramada Midoobe iyo Dowladda Soomaaliya oo heshiis cusub wada saxiixday.
Next articleFatahaadda Webiga Shabeelle Saameyn noocee ah ayuu yeeshay Warbixin.